Dad-faquuq ma ahayn in Kent Ekeroth dibedda looga saaro maqaayadda - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Xildhibaanka xisbiga Sverigedemokraterna Kent Ekeroth. Sawirle: Anders Wiklund/Scanpix
Dad-faquuq ma ahayn in Kent Ekeroth dibedda looga saaro maqaayadda
La daabacay måndag 20 januari 2014 kl 13.41
Xeerilaaliye Ronnie Jacobsson ayaa go’aan ku gaarey in aan baaritaan lagu sameyn arrintii ku saabsanayd haddii ay dad-faquuq ahayd in xildhibaanka xisbiga Sverigedemokraterna laga saaro maqaayad aragtidiisa siyaasadeed awgeed.
Xeelilaaliyuhu wuxuu sheegay in Ekeroth si qaldan dhacdadaas u qiimeeyey:
- Anigoo guriga jooga oo is diyaarinaya ayaa la soo wacay oo waan degdegsanaa. Sarkaalka mas’uulka ah ee ciidanka nabadsugidda ayaan hawshaan ka helay, isla markiina waxaan ku dhaqaaqay in aan sharciga eego. Waxaan kolkaas u arkay in ay jirtey sabab dacwad loo bilaabo, laakiin markaan si dhan ugu kuurgalay, waxaa ii soo baxay wax kale oo aragtidii hore ka geddisan, ayaan oran karaa.
Arrintaani waxay la xiriirtey booqasho uu Ekeroth jimcihii ku tegey maqaayad ku taal bartamaha Stockholm, halkaas oo markii dambe lagu khasbay in uu maqaayadda isaga baxo.
Ekeroth wuxuu sheeganayaa in sababta loo weyddiistey in uu isaga baxo maqaayaddaas ay ahayd in uu ka tirsan yahay xisbiga Dimoqraadiyiinta Iswiidhen ama Sverigedemokrat. Balse maqaayadda ayaa sheegtay in Ekeroth laga saaray maqaayadda kadib markii uu sharaf-dhac u geystey qof dumar ah oo ka mid ahayd martida maqaayadda.
Intaas kadib ayey ciidanka Säpo iyo Kent Ekeroth labaduba dhacdadaan dacwad ka soo gudbiyeen, taas oo hadda la buriyey ama la tirtiray.
Isha: Ekot, TT
Säpo oo dacwad ka gudbisey maqaayad bannaanka u tuurtay Kent Ekeroth